Sacuudi Carabiya: Isku-shaandaynta Qoyska & la-dagaallanka musuqmaasuqa – Kasmo Newspaper
Sacuudi Carabiya: Isku-shaandaynta Qoyska & la-dagaallanka musuqmaasuqa
Updated - November 5, 2017 2:02 pm GMT
London (Kasmo), Dalka Sacuudi Carabiya waxaa Sabtidii shalay gilgilay warar cusub iyo dhacdooyin raad ku yeelan doona Gobolka intiisa kale.
Waxaa ka mid ah gantaal Xuutiga dagaalka Yaman ee taageerada ka hela Iiraan ay ka soo rideen 1,200 oo Km. oo lagu hor qoortay meel aan ka fogeyn Garoonka Caalamiga ah ee Riyadh.
Taas oo macnaheedu yahay dagaalka Sacuudigu ka wado Yaman, oo markii u horreysay soo gaaray bartamaha Boqortooyada.
Waana dal isaga oo la walaacsan halista soo dhowaanshaha dagaal ilaa hadda ku koobnaa xadka dibaddiisa, midka ay ka soo yeerayaan wararka ku saabsan dib-u habayn dheellitirka siyaasadeed ee gudaha qoyska reer Boqor.
Tv-ga Al-Arabia ee Sacuudiga ayaa shaaca ka qaaday in Boqor Salmaan xalay soo saaray Dikareetooyin kala duwan: waxaa shaqadii laga eryay Madixii Ilaalada Qaranka, Amiir Mutaib bin Abdullah, oo horey ugu hanweynaa Boqornimada.
Waxaa kale oo xilkii laga qaaday Wasiirkii Dhaqaalaha, Abdel Fakeh, oo lagu beddelay ku-xigeenkiisii, Mohammed al- Twaijiri. Isku shaandhaynta xerada qoyska wuxuu dhab ahaantii, Amiirka da’da yar, Maxamed bin Salman, ku leeyahay kaalin udub-dhexaad ah oo istrateeji ah.
Wararka Tv-gu sii daayay xalay waxaa kale oo ka mid ah abuuritaanka Guddi la dagaallama musuqmaasuqa oo uu hoggaaminayo dhaxal-sugaha qudhiisa, kaas oo durbadiiba xabsiga dhigay xubno badan.
Dadka la xiray waxaa ku jira 10neeyo Amiir iyo Wasiirro hore iyo shakhsiyaad qaarkood ku dhowaayeen Qoyska, sida maalqabeenka weyn, Al-Waleed bin-Talal, milkiilaha Shirkadda “Kingdom Holding Company” ee maalgashiga Caalamiga ah.
Dhacdooyinkaan is xigxiga waxay markiiba faallooyin iyo lafaguris ka dhaliyeen, Baraha Internetka iyo Warbaahinta Bulshada oo aan ahayn kuwa Carabta oo qur ah.
Ilaa intii bilooyin ah, Amiir Maxamed bin-Salman, oo intii uusan dhaxal-sugaha noqon ahaa ninkii qorsheeyay dagaalka faraha looga gubtay ee Yaman, soona bandhigay Barnaamijka “Vision 2030”, wuxuu si muuqata uga diyaarsanayay jago weyn gudaha Qoyska iyo shabakad gaashaanbuurb ah Gobolka iyo dibaddiisa.
Isku-shaandaynta bilaabatay oo aan wali la ogeyn baaxadda dadka ay galaafan doonto, waxay u muuqataa mid lagu sii xoojinayo awooddiisa xukunka, 32 jirka loo haysto in uu dhab ahaan ka taliyo dalka uu wali hoggaaminayo aabihiisa 81 jirka ah.